Internetku wuu gaabiyaa: sababaha iyo talooyinka lagu hagaajinayo | Androidsis
Ignacio Sala | 04/09/2021 12:00 | Tababarada
Marka intarneedka uu gaabis yahay, waxaa jira sababo badan oo laga yaabo inay saameeyaan waxqabadka xiriirkeena. Intarneedka ayaa noqday mid wax lagu cuno maaddaama xilligan la joogo ay noqotay aaladda ugu weyn ee lagula xiriiro ururada rasmiga ah, si loo helo akoonnadayada bangiga, wax loo barto iyo kiisas gaar ah oo meel fog laga shaqeeyo.
In kasta oo kiiskii dambe, looma tixgelin karo inuu yahay wanaag asaasi ah laakiin sida hal qalab shaqo oo kale. Haddii xiriirkayaga internetku uu gaabis yahay, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan ogaano maxay yihiin sababaha keena, sababaha aan daruuri ahayn inay la xiriiraan rakibaadda ama aaladahayaga.
1 Waa maxay xawaaraha xiriirkeena
2 2,4 GHz vs 5 GHz isku xirka Wi-Fi
3 Arrimaha caymiska
4 Waxaa naga dhammaaday xogtii moobilka
5 Dambiile, Netflix
6 Server -ka aan ku xirnaa waa mid gaabis ah
7 Waxaan leenahay kuwa soo galaya xiriirkeena
8 Meel la'aan qalabkayaga
9 VPN -yada waxay yareeyaan xawaaraha isku xirka
Waa maxay xawaaraha xiriirkeena
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ogaano ka hor intaanan bilaabin raadinta xalka dhibaatada laga yaabo inaysan la xiriirin aaladdayada, waa inaan ogaano waa maxay xawaaraha xiriirkeena. Hawl -wadeennada taleefanka, ayaa noo geliyay bogagga shabakadaha kala duwan si aan u cabbirno xawaaraha, si kastaba ha ahaatee, waxa ugu fiican dhammaantood waa kan Netflix uu na siiyo.
Netflix waxay noo fidisaa shabakadda annaga dhakhso.com, bogga webka oo noo saamaxaya inaan si dhakhso ah u ogaano xawaaraha soo dejinta iyo soo dejinta labadaba dhowr ilbidhiqsiyo gudahood. Haddii aan haysanno kombiyuutar, waxaa habboon in la sameeyo tijaabadan xawaaraha iyadoo lagu xirayo fiilada ethernet -ka qalabka.
Haddii kale oo router-ku wuxuu la jaan qaadayaa shabakad 5 GHz ah, waa inaad nagu xirtaa shabakaddan Wi-Fi iyo sida ugu macquulsan ugu dhow router. Xidhiidhka noocan ahi wuxuu na siiyaa xawaare sare oo isku xirnaan marka la barbar dhigo shabakadaha 2,4 GHz, si kastaba ha ahaatee, baaxadda ayaa ka hooseysa.
Haddii xawaaraha xiriirku uu sarreeyo (marna kuma habboona xawaaraha uu bixiyo hawlwadeenku), tusaale ahaan laga bilaabo 50 Mbps (yaan lagu khaldin MB) iyadoon loo eegin xawaaraha aan qandaraaska ku qaadnay, waxaan meesha ka saari karnaa in xiriirintayada internetku ay tahay dhibaatada markaa waa inaan dhibaatada ku raadinnaa habab kale.
Haddii xawaaraha iskuxirka lagu muujiyo Kbps (1000 Kbps waa 1 Mbps) ama waa 1 ama 2 Mbps, si cad waxaan leenahay dhibaato xiriirWaa hagaag, halkii, waa hawlwadeenka oo aan na siinin xawaaraha aan qandaraaska ku helnay. Waxa kaliya ee aan sameyn karno waa inaan la xiriirno ISP -gaaga oo aan soo sheegno dhibaatada si ay u xalliyaan ama ay noogu soo bandhigaan xal taleefan.
2,4 GHz vs 5 GHz isku xirka Wi-Fi
Markii shabakadaha Wi-Fi bilaabeen inay gaaraan dhammaan isticmaaleyaasha, hawlwadeennada ayaa bixiyay jiheeyayaasha taageera shabakadaha 2,4 GHz kaliya. Maadaama sanadihii la soo dhaafay oo noocyadan isku -xirnaanta ah ay horumareen, hawl -wadeennadu waxay hagaajiyeen bixinnadooda waxayna bixiyeen jiheeyeyaal ku habboon 2,4 GHz iyo 5 GHz network.
Shabakadaha 2,4 GHz waxay bixiyaan a xawaaraha isku xirka hoose marka la barbar dhigo shabakadaha 5 GHz, shabakadaha na siiya isku -xirka xawaaraha toban jeer ka sarreeya shabakadaha 2,4 GHz.
Farqiga kale ee u dhexeeya shabakadaha 2,4 GHz iyo 5 GHz waa baaxadda. Halka Shabakadaha 2,4 GHz waxay leeyihiin baaxad aad u weyn, Shabakadaha 5 GHz adoo diiradda saaraya xawaaraha, waxay bixiyaan tiro aad u yar.
Sababtoo ah nooc kasta oo shabakad ah ayaa na siiya faa'iidooyin kala duwan, dhammaan jiheeyeyaasha ay bixiyaan hawlwadeennada iyo in aan ka heli karno dukaamada si aan u iibsanno, had iyo jeer noo soo bandhig labada nooc ee shabakadaha ee aan soo sheegay tan iyo is kaaba.
Markaan ogaanno farqiga u dhexeeya labada shabakadood, waa inaan aqoonsannaa si aan u hubinno haddii dhibaatada xawaaraha ee xiriirintayada internet -ka ay sabab u tahay inaan ku xirnay shabakad 2,4 GHz. 5 GHz network ku dar dhammaadka magaca shabakadda Wi-Fi erayga 5Ghalka shabakadaha 2,4 GHz aysan ku darin wax shuruudo dheeri ah dhammaadka magaca shabakadda.
Meesha sare ee aaladdayada gacanta, a Saddex-xagalka la rogay oo leh silsilado taxane ah oo nooga warramaya daboolidda, kiiskan Wi-Fi, aaladdayada. Haddii laba layn ay maqan yihiin, sababta internetku u gaabis yahay waa sababta oo ah waxaan ka fognahay router -ka oo xiriirku si fudud uma gaadhin aaladdayada.
Haddii aanan ku xirnayn shabakad Wi-Fi laakiin aan ku xirneyn xiriiriyaha xogta moobiilka ee hawlwadeenka, waa inaan hubi baararka daboolida iyo lambarka lagu soo bandhigay agtiisa. Haddii baararka qaarkood maqan yihiin oo 4G ama 5G aan lagu soo darin agteeda, waxay la macno tahay inaan beddelno booska haddii aan rabno inaan hagaajino xawaaraha xiriirkeena.
Labaduba waxay leeyihiin mobilada iyo Wi-Fi waxaa lagu beddeli karaa qalabka korontada iyo derbiyada iyo derbiyadaSidaa darteed, mararka qaarkood, xoogaa dhaqaajinta iyo beddelidda mowqifkeenna dhowr mitir ayaa si dhakhso leh u xalliya dhibaatooyinka xawaaraha ee xiriirkeenna.
Waxaa naga dhammaaday xogtii moobilka
Haddii aad haysato khad lacag -bixin ah, bil kasta waxaad haysataa xaddi GB ah oo xog ah, xog aad mar uun wada baabisay, yaree xawaaraha isku xirka internetka ugu yaraan, si cadaalad ah oo lagama maarmaanka u ah in la isticmaalo aaladaha farriimaha si loo diro farriimaha, laakiin aan ahayn sawirro iyo fiidyowyo aad u yar ama farriimo maqal ah.
Si aan u ogaano haddii aan dhammeystirnay dhammaan gunnadii xogta ee aan helnay bil kasta, waa inaan sidaas yeelnaa u isticmaal dalabka hawlwadeenkaaga aaladaha mobilada. Haddii ay suurtogal tahay, waa hawlwadeen aan bixin codsiyada noocaan ah, waxaan la xiriiri karnaa lambarka adeegga macmiilka si aan u ogaano macluumaadkaas.
Aaladaha qulqulka fiidiyaha waxay u baahan yihiin xawaare isku xir oo sarreeya iyo, sida caadiga ah, isticmaal inta badan isku xirka internetka marka la isticmaalayo. Haddii qof gurigaaga ka tirsan uu ku xiran yahay mid ka mid ah aaladahaan, xawaaraha isku xirkaagu ma aha dhowr boqol Mbps oo waxaad la kulantay dhibaatooyin xagga xawaaraha internetka ah, waad ogtahay waxa sababay.
Server -ka aan ku xirnaa waa mid gaabis ah
Tani waa sabab kale oo saameyneysa xawaaraha isku xirkayaga intarneedka, iyo sidoo kale xawaaraha raridda ee bogagga internetka qaarkood. Marka bogga webka aan isku dayeyno inaan soo booqanno culeysyo aad u gaabis ah, waxay u badan tahay in dhibaatadu aysan la xiriirin xiriirkeenna intarneedka, laakiin halkii ay dhibaatadu ku xirnaan lahayd server -ka halka lagu martigeliyay.
Dhibaatadani inta badan ma badna, laakiin haddii aan ku xirno bogagga shabakadda ee aan aad loo jeclayn (ama sumcad shaki ku leh macluumaadka ay bixiyaan), bogagga shabakadda ee lagu qabto kombiyuutarada ama server -ka ayaa la ildaran weerarka DDoS, diidmada weerarrada adeegga oo burburiya hawlgalka server -yada, dhibaatadu kuma jirto xiriirkeena laakiin server -ka waxaan isku dayeynaa inaan ku xirno.
Waxaan leenahay kuwa soo galaya xiriirkeena
Haddii aanaan ilaalin xiriirkeena Wi-Fi oo leh sir sir ah, waxaa suurtogal ah in mid ka mid ah deriskayaga qaaliga ah, ayaa u isticmaalaya xiriirkeena si aan u isticmaalno nuxurka, inta badan iyada oo la adeegsanayo qulqulka, waxa ku jira, sida aan kor ku sharxay, waxay u egtahay inay nuugto inta ugu badan xadka isku xirka.
Haddii aan rabno inaan hubinno haddii qof xado qayb ka mid ah signalada Wi-Fi, waxaan ka heli karnaa router -ka kombiyuutar ama aalad mobiil si aan u hubinno dhammaan aaladaha isku xira ama waligood ku xirnaa router -ka. Qeybta hoose ee router -ka waxaad ka heli doontaa cinwaanka gelitaanka iyo furaha sirta labadaba.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u gasho router, iyada oo ku xidhan moodalka, waa la soo bandhigi doonaa liiska dhammaan aaladaha ku xirnaa router -ka. Haddii aynaan aqoonsan midkood, waxaan ku dari karnaa liiska madow, inkasta oo waxa ay tahay inaan sameyno aan beddelno furaha sirta ee router -ka si looga hortago deriskayaga inuu ka faa'iideysto xiriirkeenna internetka.
Meel la'aan qalabkayaga
Maqnaanshaha qalabkeena, ha ahaato aaladda gacanta ama kombiyuutar, waxay saameysaa waxqabadka aaladda dhinac walba, ma aha oo kaliya xagga xawaaraha laakiin sidoo kale xawaaraha isku xirka internetka.
Haddii booska laga heli karo aaladdaada ama kombiyuutarkaaga wuxuu ka hooseeyaa ugu yaraan wax ka yar 1 GB mobilada iyo in ka yar 50 GB kombiyuutarrada, waa inaad ka fekertaa nadiifinta haddii aad rabto in xawaaraha iskuxirku uu la mid noqdo sidii caadiga ahayd.
Iyadoo nadiifinta kombiyuutarku ay aad u fudud tahay, maadaama lagu xaliyo inta badan tirtiridda filimada aan soo dejinnay, aaladda moobiilka xoogaa way ka dhib badan tahay.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan adeegsanno dalabka Google faylasha, waxaan si dhaqso leh u xallin doonnaa dhibaatada maadaama codsigan uu falanqeyn doono aaladdayada iyo ayaa nagu martiqaadaya inaan ka saarno dhammaan waxyaabaha ku jira in aynaan isticmaalin marka lagu daro codsiyada oo aynaan muddo furan.
VPN -yada waxay yareeyaan xawaaraha isku xirka
VPN -yada, shabakadaha gaarka loo leeyahay ee khaaska ah noo ogolow inaan si qarsoodi ah u daalacanno iyada oo aan hawlwadeenkeenna intarneed ogeyn bogagga shabakadda ee aan booqanno ama server -yada aan ku xirno, laakiin uma oggolaanayaan inaan ku soconno xawaare isku mid ah, aragti ahaan, hawl -wadeenkeennu wuxuu na siiyaa.
Tani waa sababta oo ah kooxdayadu waxay isku qarinaysaa isku xidhka oo dhan kooxdeena ilaa adeegayaasha shirkadda VPN, adeeggani waa kii wuxuu u dhaqmaa sida hagaha si uu noogu xiro bogagga shabakadda ama server -yada aan galno. Sababtan awgeed, xawaaraha isku xirka ee ay bixiyaan adeegyadan la mid ma aha kii aan qandaraas ku siinnay hawlwadeenkeena.
Haddii lagu daro, bixiyahayaga VPN ma na siiso xawaare isku xirnaan sare, wuxuu ku qeexayaa websaydhkiisa, xawaaraha daalacashadayada si weyn bay u saamayn kartaa waxayna ka mid noqon kartaa sababaha uu internetkeennu gaabis u yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Internetku wuu gaabiyaa: sababaha iyo talooyinka lagu hagaajinayo
Xeeladaha SimCity Buildit: ka dhig magaaladaada inay koraan adigoon joogsan